Shiinaha Nadiifiyaha Gacanta Qoyaanka 500ml TECH-BIO warshad iyo soosaarayaasha | Zhongrong
Saamaynta covid-19, Gacanta Fayodhowrka nadaafadeed wuxuu noqdaa baahida daryeelka shaqsiyeed ee aan u qabno nolol maalmeedkeena gaar ahaan meelaha dadweynaha qaarkood sida iskuulka, isbitaalka, supermarket, hudheel, iwm. Badeecadani waxay ka kooban tahay 75% aalkolo oo dili kara coronavirus iyo jeermisyada kale si loo ilaaliyo caafimaadkeena si wax ku ool ah. Baakada 500ml aad ayey ugu fiican tahay isticmaalka qoyska waana la joojin karaa qiyaastii nus bil. Markaan soo saareyno aalkolo alaabta ceyriinka ah, qiimaheena wuxuu noqon doonaa mid aad loola tartamo oo tayo sare leh nadiifiyaha gacmaheena. Ka sokow, waxaan ka gudubnay CE, FDA, iyo xaqiijinta ISO. Waxaan bilaabaynaa sumadFarsamada-BIO in laga dhigo sumadda 1aad ee sumowga jeermiska ee Shiinaha maadaama aan haysano tayada ugu wanaagsan ee khamriga Shiinaha. Waxaan hogaamineynaa Shiinaha dhanka tikniyoolajiyadda ethanol. Waxaan haynaa qiyaastii 500,000 mitir laba jibaaran oo aqoon isweydaarsi ku yaal gobolka Hebei, Shiinaha. Shirkadeena waxaa la aasaasay sanadkii 1999. Sikastaba, waxaan sidoo kale aqbali karnaa OEM & ODM dhamaan noocyada nadaafada gacmaha. Rajeynaya inaad noqoto lammaanahaaga caalamiga ah oo aad buuxiso xaalad guuleysi ah!
Waxyaabaha aan firfircooneyn: Biyaha la sifeeyey, Carbopol, Khamriga Isopropyl, Triethanolamine, Udgoon.
Maxay yihiin waxyaabaha "caamka ah" ee ay nadiifiso? Ma dili doonaa koronta?
JAWAABKA UGU FIICAN:
Waad ku mahadsan tahay su'aasha weyn! Waxaan si buuxda u fahmaynaa sababta aad su'aashan u weydiineyso. Waxaa muhiim ah in la ogaado in FDA aysan hadda ansixin wax daawo ah, oo ay ku jiraan gacmo nadiifiyaha, si looga hortago ama loo daaweeyo covid-19. Waxaan qaadeynaa mas'uuliyadeena si aan u hubino in macaamiisha ay aadayaan meesha saxda ah ee macluumaadka noocan ah, sidaa darteedna aan kugula socodsiinno shabakadaha FDA ama CDC si aad wax uga ogaatid doorka nadaafadda ee ka hortagga faafitaanka COVID.
Haye, sidee ayaad kuheleysaa matoorku inuu shaqeeyo? Waxaan soo iibsanay dhalo laakiin waxaan u maleyneynaa in mashiinku cilad leeyahay. Ma jirtaa hab gaar ah oo lagu shaqeeyn karo?
Waad ku mahadsantahay inaad gaartid Nadaafadda Gacanta Qoyaanka TECH-BIO! Isku day inaad hoos ugu riixdid mashiinka baabacadaada kuna jeesanaysa dhinaca saacadlaha iyadoo alaabtu ku soo jeeddo. Bamka waa inuu markaa soo baxo.
Hore: Nadiifiyaha Gacanta ee OEM
Xiga: 50ml Gacmo Nadiifiyaha Jel TECH-BIO